Diesel Engine, Marine Turbocharger, Air Compressor - Ranomasina Sinoa
Qinhuangdao Sino-Ocean Marine Equipment & Machinary Co., Ltd.
Nanomboka tamin'ny 1995, Qin Huangdao Sino-Ocean Marine Equipment & Machinary Co., Ltd. dia nanolo-tena hanome serivisy fitsaharana mitokana sy matihanina ho an'ny indostria an-dranomasina. Izy io dia nanjary orinasa lehibe iray izay manangona ireo kojakoja fanampiny 'mamatsy, manodina ary manavao, manamboatra sambo, manohana ara-teknika ary manome fitaovana amin'ny fanamboarana sambo.
Fametahana hafanana takelaka
Ny orinasanay dia nitazona fiaraha-miasa akaiky amin'ireo mpanamboatra motera lehibe sy orinasa hafa manerantany, malaza amin'ny loharanom-bola azo antoka, ny kalitao avo lenta ary ny vidiny mirary.
Ny orinasanay dia mpamatsy ny faritra atsimbon'ny mpamokatra malaza manana tahiry 90% amin'ny entana entana andalana. Ity tombony azo antoka ity dia tsy hoe mamonjy fotoana sarobidy fotsiny fa manome antsika mialoha mihoatra ny mpifaninana. Toy izany koa ny politika momba ny vidiny mirary tombony ary mamela ny toe-javatra mahasoa ho an'ny mpanjifa.
Ampahany lehibe amin'ny filôzôfia an-dranomasina Sino-ranomasina ny fanomezana vahaolana avo lenta sy haingana. Noho izany, ny ranomasina Sino-ranomasina dia namorona tambajotra mahomby izay misy injenieran'ny maritime marobe, mpamatsy OEM, trano fitehirizana stratejika ary mpanjifa afa-po.
Exchanger hafanana takelaka
Fanodina, -bazana, Fehiloha mitazona,